अन्तिम दिन उत्साह थपेको नेप्से अब बढ्ला ?
बिहीबार नेप्सेको शानदार बढोत्तरीले लगानीकर्तालाई उत्साह थपेपछि यतिबेला आगामी साता नेप्से कता जाला भन्नेमा चासो बढेको छ। बिहीबार एकै दिन ३७ अंकले नेप्से बढेपछि समग्र सातालाई धनात्मक अंकको टेवा पुगेको छ।
साताभर नेप्से परिसूचक ११ अंकले बढेको छ। पहिलो दिन आइतबार १५२९ अंकमा रहेको नेप्से अन्तिम दिन बिहीबार १५३० अंकमा कायम भएको छ। बुधबार १४९३ अंकसम्म झरेको बजार बिहीबार एकै दिनको बढोत्तरीले समग्र सातालाई प्रभाव पार्न सफल भएको हो।
यस साता नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा १७७ कम्पनीहरुको तीन अर्ब ६१ करोडको सेयरहरु खरिद बिक्री भएका छन्। कारोबार रकम गत साताको भन्दा ५५ प्रतिशत बढी हो। गत साता १७१ कम्पनीहरुको दुई अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको सेयरहरु खरिद बिक्री भएका थिए।
गत साता ३ दिन मात्रै कारोबार भएकोमा यो साता ५ दिन कारोबार भएको थियो। साताभर बैंकि ६, बिमा १५४, उत्पादन ४२, व्यापार १७, जलविद्युत १८, होटल ४७, अन्य ५ र वित्त समूह २० अंकले बढेका छन्। विकास बैंक समूह भने यो साता १८ अंकले घटेको छ।
‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा १.५ अंकले बढेर ३२० अंकमा आईपुगेको छ ।
यस साता कारोबार रकम (१९ करोड १४ लाख ४० हजार रुपैयाँ) को आधारमा नविल बैंक लिमिटेड अग्रस्थानमा रहेको छ।
त्यसैगरी कारोबार भएको सेयर संख्या (तिन लाख ५४ हजार कित्ता) को आधारमा नेपाल बैंक कम्पनी लिमिटेड संस्थापक अग्रस्थानमा रहेको छ। मिर्मिरे माक्रोक्रेडिट, हाम्रो विकास बैंक र स्वरोजगार लघुवित्तको हकप्रद सेयर सूचीकृत भएको छ।
अब बढ्ला त नेप्से ?
नेप्से बढ्छ या घट्छ भन्ने कुरामा धेरैले आफूलाई अनुकुल हुनेगरी व्याख्या गर्ने गरेको पाइन्छ। तिनैले आ–आफ्ना प्राविधिक तथा सैद्धान्तिक व्याख्या गरी बजारमा अनेक हल्ला चलाउँदा धेरै हदसम्म नेपालको सेयर बजार प्रभावित हुने गरेको अनुभवी लगानीकर्ता बताउँछन्।
घटाएर किन्न खोज्नेले ‘सेयर आपूर्ति बढ्यो, किन्नेहरु छैनन्, बजार घट्छ’ भनेर हल्ला गर्ने र बेच्न खोज्नेले ‘अब बजार माथि हुत्तिन्छ, पुरानो रेकर्ड भंग हुन्छ’ भनेर हल्ला गर्ने गरेको लगानीकर्ता पिताम्बर खरेल बताउँछन्।
‘यहाँ दुवै पक्षको अतिवादी हल्ला फैलिन्छ, जसले गर्दा घटेपछि लगातार घट्ने र बढ्दा एक्कासी माथि जाने गरेको देखिन्छ’ उनले भने ‘सबैले घटेका बेला किन्ने र बढेका बेला फाइदा लिई बेच्ने हो भने बजार आफै सन्तुलनमा आउँछ, कोही आत्तिने र मात्तिनुपर्ने अवस्था छैन।’
यतिबेलाको बजार सेयर किन्नेहरुका लागि अनुकुल नै रहेको उनले बताए। ‘धेरैको लाभांश आउनै बाँकी छ, लाभांश दिन सक्ने राम्रा कम्पनीहरु छानेर केही वर्ष राख्नेगरी यतिबेला किन्ने हो भने घाटा हुँदैन’ उनले दावी गरे।
तर बजार बढ्दै गएर अघिल्लो रेकर्ड तोडिने हल्ला पनि अतिवाद भएको उनले बताए। ‘यसको मतलव अब बजार बढिरहन्छ भन्ने होइन, केही दिन बढे पनि धेरै अंकले माथि जाँदैन’ उनले आफ्नो अनुमान सुनाए ‘मेरो विचारमा १५ सयदेखि १६ सयको बीचमा नेप्सेको अंक अडिनुलाई उपयुक्त मान्नुपर्छ ।’
बजारमा मुद्राको स्थिति, राजनीतिक तथा आर्थिक कारणले नेप्सेलाई प्रभाव पार्ने अवस्था यतिबेला नरहेको उनले बताए। ‘लगानीयोग्य रकम बढेको छ, सेयर धितोमा पनि कर्जा जान थालेको छ, अर्कोतर्फ राजनीतिक रुपमा पनि कुनै जटिल स्थिति छैन, दुई ठूला चरणका चुनाव हुनै बाँकी छ, वातावरण सकारात्मक बनिरहेको छ, बजार घट्नुपर्ने कारण नै थिएन’ उनले भने।
बजारमा आपूर्ति बढ्दा लगानीकर्ताको संख्या पनि बढेको उनले दावी गरे। अर्कोतर्फ लगानीकर्ताको हैसियत पनि बढेकाले आपूर्ति नै बजारले धान्न सक्दैन भन्नु गलत हुने उनको बुझाई छ।
‘पहिले २ लाखको पोर्टफोलियो बनाउनेले अहिले १० लाखको बनाउन सक्ने क्षमतामा पुगे, यसले गर्दा बढेको सेयर संख्या धान्नै नसक्ने भन्ने पनि होइन तर आपूर्तिको प्रभाव भने परेकै हो’ खरेलले भने। किन्नेहरुले पनि उपयुक्त मूल्य तोक्ने र उचालिएर किन्न नहुने तथा बेच्नेले पनि आत्तिएर बेच्न नहुने उनी बताउँछन्।
‘म सबैलाई के भन्छु भने बजार केही बढ्दैमा उचालिएर किन्ने नगर्नुहोस्, बरु नाफा लिँदै बेच्न थाल्नुहोस् अनि घट्दै गर्दा आत्तिएर बेच्ने होइन, सस्तोमा उठाउन थाल्नुहोस्, तपाई पनि घाटामा जानुहुन्न, बजार पनि सन्तुलनमै रहन्छ’ उनले भने। बजारको विशेषता नै घटबढ हुनु भए पनि पछिल्लो उच्च उतारचढावले लगानीकर्ताको मनोबलमै असर पार्ने गरेको उनको बुझाई छ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, भदौ ३१, २०७४, ०१:२४:१२